Adeeggii Astaanta Qaran ee Internetka (dotSO) ee wasaaradaha dowladda oo la bilaabay - Jazeera FM
Adeeggii Astaanta Qaran ee Internetka (dotSO) ee wasaaradaha dowladda oo la bilaabay
Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknolojiyada ayaa ku dhawaaqday in si rasmi ah loo billaabay adeegyadii astaanta internet-ka ee qaranka Soomaaliyeed (dotSO) ee loogu talagalay wasaaradaha iyo hay’adaha kale ee dawladda.
Arrintan ayaa qeyb ka ah dadaallo is daba joog ah oo qeyb ka ah qorshe 90 maalmood ah, oo ay ansixiyeen golaha Wasiirrada, kaasi oo ay Wasaaraddu ku dooneyso in ay adeeggaas uga dhigto mid si buuxda uga hawl-gala gudaha wasaaradda.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta & Teknolojiyada, Mudane Eng Cabdi Cashuur Xasan, ayaa sheegay in isla markii uu xilka la wareegay inuu mudnaanta 1aad ka dhigtay in adeegga astaanta qaranka ee internetka uu si habsami leh uga shaqo billaabo dalka, isagoo hoos imanaya wasaaradda. “Waxyaabo badan ayaa noo hirgalay muddo kooban gudaheed. Waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha, ra’iisul asaaraha iyo golaha wasiirrada oo nagu taageeray qorshaha aan arrintan u sameynay iyo cid kasta oo nagala shaqeysay hawshan.”
← Soomaaliya oo hirgelinaysa Warbaahinta Bulshada isla markaana sidii TV-yada Dalka Digital looga dhigi lahaa
Gabar saaxiibkeed ku qalqaalisay in uu is dilo oo la maxkamadeynayo →